10 isticmaalka cajaladda daawada ilkaha - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • QODOBO • WAXYAABAHA CAAFIMAADKA • beauty • DARYEELKA CAAFIMAAD • daryeelka »10 isticmaalka cajiibka daawada ilkaha
10 isticmaalka cajiibka daawada ilkaha
ALEXIS WAYAN 1 March 2019
Le cadayga waxay naga caawineysaa in aan daryeelno ilkaha iyo neefta, laakiin waxay noqon kartaa mid waxtarka leh. halkan waa 10 isticmaalka cajiibka daawada ilkaha : Dhexdhexaad, daawada ilkaha!
1. Wixii ciddiyaha jilicsan
Si ciddiyaha u iftiin leh, si tartiib ah ugu duugee daawada ilkaha yar.
2. Si xanuunka loo yareeyo
On gubasho, gooyo ama xoqan, daawada cadayga waxay leedahay saameyn deg deg ah!
3. Si loo yareeyo qaniinyada cayayaanka
Si looga hortago cayayaanka ugu xun ee xagaaga - kaneecada - daawada cadayga waxay noqon kartaa caawinaad weyn. Waxay suuxisaa qaniinyada qaniinyada cayayaanka.
4. Si loo daweeyo finanka
Haa, waxaan dhigi karnaa daawada ilkaha si aan u daaweyno finan yaryar!
5. Si loo baabi'iyo finanku si deg deg ah
Waxyaabaha caadiga ah: gelinta daawada cadayga ee badhanka si aad u qallajisid habeenkii. Guryaha daawada ilkaha ee anti-bakteeriyada waxay awood u leeyihiin in ay ka gudbaan finan yaryar!
6. Si aad timo timahaaga
Miyaadan haysan wax jilicsan? U daadi daawada cadayga! Isticmaal xaddiga yar, wuxuu xakameyn karaa qaybo iska horimaad ah.
7. Si aad u qariso casaanka
Waxaan ku dhajin karnaa daawada cadayga oo aan imperfection ka hor inta aan la isticmaalin saldhigan.
8. Si loo saaro lebbiska
Qalab yar oo wax ku ool ah: daawada cadayga ayaa maamusha si ay u lumiso dhar daboolka dharka. Waxa kale oo ay wax ku ool u tahay in laga saaro calaamadaha qalinka, labadaba dharka iyo derbiyada (haddii loo baahdo!).
9. Si aad u ceshato ur xun
Miyaad hoos u dhigtay toon ama basal oo gacmahaagu leeyihiin ur ur aan fiicnayn? Ku dhaq daawada ilkaha yar. Dhamaan, urta xun!
10. Si looga fogaado qulqulka
Si aad uga hortagto qulqulka qubeyska, ku rid foollada cadayga ee maro iyo daaqadahaaga iyo muraayadaha. Lakabka yar ee daawada cadayga ayaa ka dhigi doona ciriiri daro. Uma baahnid inaad sugtid ka hor inta aadan gelin qurxin, weyn! SOURCE: FADHIGA MAALINTA
Talooyin: Tani waxay badbaadin kartaa nolosha: video Tani waxay idin bara sida aad u qaadaan gargaarka mergado
Saamaynta 10 ee sinjiga caafimaadka ... iyo khatarteeda!